Boqortooyada Midowday (UK) waxay hadda kor u qaadday La-talinta Safarka ee Ka-hortagga Socdaalka aan Muhiimka ahayn ee Jamaica
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Boqortooyada Midowday (UK) waxay hadda kor u qaadday La-talinta Safarka ee Ka-hortagga Socdaalka aan Muhiimka ahayn ee Jamaica
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett wuxuu soo dhoweeyay wararka sheegaya in Dowladda UK ay kor u qaaday la-taliyihiisii ​​ka dhanka ahaa dhammaan safarada aan muhiimka ahayn ee Jamaica.
Iyada oo ku saleysan qiimeynta khataraha hadda jira ee la xiriira COVID-19, Boqortooyada Midowday waxay meesha ka saartay xayiraadihii safarka Jamaica.
Suuqa UK wuxuu muhiim u yahay Jamaica, sidaa darteed waddanku wuxuu si aad ah u rajaynayaa inuu soo dhaweeyo booqdayaasha UK mar kale.
Jidadka Dib -u -adkeysiga Dalxiiska ee Jamaica waxay ahaayeen kuwo aad waxtar u leh, waddankuna wuxuu rabaa dadka socotada ah inay dareemaan ammaan iyo kalsooni markay booqanayaan.
Horumarka ayaa yimid kadib markii Xafiiska Arrimaha Dibadda, Barwaaqo-sooranka & Horumarinta ee UK, uu soo saaray casriyeyn goor hore oo maanta ah, isagoo meesha ka saaray xannibaado la xiriira COVID-19 oo ku saleysan qiimeynta hadda jirta ee halista la xiriirta masiibada.
Iyada oo la tixraacayo ogeysiiska, TUI, oo ah shirkadda ugu weyn dalxiiska adduunka, ayaa la filayaa inay dib u bilowdo duulimaadyadii jasiiradda bishaan, ka dib markii ay hakisay bishii Ogosto sababtuna tahay talada Dowladda UK ee dadka deggan oo ka dhan ah safarka aan muhiimka ahayn ee jasiiradda sababtuna tahay COVID -19 hanjabaad.
Soo dhoweynta warka Wasiirka Bartlett, wuxuu xusey in “ay siin doonto kor u-qaadis aad loogu baahan yahay waaxda dalxiiska iyo shaki la’aan faa’iido u leh dhaqaalaha. "
“Ku dhawaaqista maanta waa horumar weyn oo loogu talagalay Warshadaha dalxiiska ee Jamaica. Anaga Jamaica ahaan, suuqa UK waa u muhiim, sidaa darteed waxaan si xamaasad leh u filaynaa mar kale inaan ku soo dhaweyno booqdayaasha UK meesha aan u soconno. Ku dhawaaqistu waxay gacan ka geysan doontaa in shidaalka ka imanaya suuqaas ay gacan ka geysato dib u soo kabashada waaxda dalxiiska iyo dhaqaalaha Jamaica, ”ayuu yidhi.
Duulimaadyada TUI iyo adeegyada dalxiiska ayaa sidoo kale dib u bilaaban doona, taas oo ah dhawaaq aad loo soo dhoweeyay daneeyayaashayada oo si weyn ugu tiirsan kooxdan weyn ee caalamiga ah, oo ah markabka ugu weyn ee dalxiisayaasha UK u taga Jamaica, ”ayuu yiri Bartlett.
“Waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo booqdayaashayada UK, in Jamaica ay tahay meel aad ammaan u ah. Wadooyinkeena adkeysiga dalxiiska aad bay wax u tarayeen waxayna arkeen heerka caabuqa oo aad u hooseeya. Ahmiyadeena ugu saraysa waxay ahayd welina waxay siinaysaa kalsoonida socotada. Waxaan rabnaa in dadka socotada ah ay dareemaan ammaan iyo kalsooni ay nagu soo booqdaan iyo inay sidoo kale yeeshaan khibrad xusuus leh, ”ayuu raaciyay.
TUI waa kooxda dalxiiska ee ugu horreysa adduunka. Faa'iidooyinka ballaaran ee lagu soo ururiyey dalladda Kooxda waxay ka kooban yihiin hawl wadeenno dalxiis oo xoog leh, qaar ka mid ah 1,600 wakaaladaha socdaalka ah iyo kuwa hormuudka ah ee baraha internetka, shan diyaaradood oo leh ku dhawaad ​​150 diyaaradood, qiyaastii 400 huteel, ku dhawaad ​​15 maraakiibta safarka ah iyo hay'ado badan oo soo gala dhammaan meelaha fasaxa waaweyn ee adduunka oo dhan . Wuxuu daboolayaa silsiladda qiimaha dalxiiska oo dhan hal saqaf.